Olana sy fanamby atrehana amin'ny fiaramanidina any Amerika hiadian-kevitra
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Olana sy fanamby atrehana amin'ny fiaramanidina any Amerika hiadian-kevitra
Ny olana farany sy ny olana atrehin'ny fiaramanidina any Amerika dia hiadian-kevitra mandritra ny fotoam-pivorian'ny kaonferansa ny hetsika faha-11 faha-2017 Routes America manomboka amin'ny andro vitsivitsy. Ny sesiona dia hampiditra ny fomba nakan'ny indostria manerana an'i Amerika atsimo sy afovoany ny tenany taorian'ny tohin'ny loza voajanahary mahatsiravina tamin'ny XNUMX.
Hifamotoana ao Quito ny indostrian'ny seranam-piaramanidina amin'ny herinandro (13-15 feb) mba handrafetana sy hifampiraharahana amin'ny serivisy amin'ny serivisy vaovao any Amerika Avaratra sy atsimo ary Karaiba. Ity hetsika ity dia hiaraka amin'ny seranam-piaramanidina, seranam-piaramanidina ary manampahefana misahana ny fizahan-tany hamolavola tambajotram-pifamoivoizana. Ny hetsika 2018 dia karakarain'ny Kaominin'i Quito, Sekretariatin'ny fampandrosoana sy ny fifaninanana mahomby, Quito Turismo, ary Corporación Quiport.
Hisy solontena 650 handray anjara amin'ny fivoriana 2,100. Ny seranam-piaramanidina malaza izay hanatrika dia ahitana ny American Airlines, International Airlines Group (IAG), Aeroméxico, Air Canada, LATAM, TAME, ary JetSmart. Seranam-piaramanidina 70, seranam-piaramanidina 150 ary tompon'andraikitra fizahan-tany 35 no andrasana amin'ny totaliny.
Ireo mpandahateny avo lenta dia ahitana: Juan Carlos Zuazua, Lehiben'ny mpanatanteraka, VivaAerobus; Declan Ryan, Lehiben'ny mpanatanteraka, Viva Air; Maribel Rodriguez, talem-paritry ny Eropa atsimo sy ny LATAM, World Travel & Tourism Council (WTTC); ary Peter Cerdá, filoha lefitry ny faritra, The Americas, International Air Transport Association (IATA).
Quito dia toerana fizahan-tany mitombo haingana. Nomena ho iray amin'ireo lova voalohany an'ny UNESCO World Cultural Heritage tamin'ny taona 1978, ny tanàna dia manana ivon-toerana mpanjanatany espaniola voatahiry tsara ary vavahady mankamin'ny Amazonie Ekoatera sy ny Nosy Galapagos.
Ny indostrian'ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany any Ekoatera dia nanohana mivantana asa 137,500 2016 tamin'ny 2 ary ny anjara birikiny faobe dia nihoatra ny $ 196,000bn. Ny World Travel & Tourism Council dia nanombatombana fa ny fandraisana anjaran'ity sehatr'asa ity dia hiakatra amin'ny asa 2027 amin'ny 3.36 ary ny harin-karena faobe dia mety mitentina 2.5bn $, mitovy amin'ny XNUMX isan-jaton'ny harin-karena faobe.
Tamin'ny Desambra 2017, ny filohan'i Ekoatera, Lenín Moreno, dia nanao sonia ny didim-pitondrana iray momba ny fampiharana ny politika Open Skies - hetsika izay ahafahana manatsara ny fifandraisana, manokatra tsena vaovao, mampitombo ny fizahan-tany ary mamorona asa vaovao.
Ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Quito no vavahady lehibe mankany Ekoatora. Vokatry ny ezak'i Quiport hahazoana toerana vaovao iraisampirenena miaraka amin'ireo zotram-piaramanidina marobe miasa, ny IATA Connectivity Index an'ny seranam-piaramanidina dia nihoatra ny avo roa heny tao anatin'ny enin-taona lasa (4.25% ka hatramin'ny 10.24%). Ny seranam-piaramanidina dia namatsy vola $ 133m mahery tamin'ny tetikasa hanatsarana ny fotodrafitrasa sy ny kalitaon'ny serivisy.